Raha tsara vintana ianao mba manana George Clooney toy ny babo antso (ary tsy izaho fa tsara vintana), ny isan’ny antony iray ny vehivavy daty tanora kokoa ny olona dia satria izy ireo sexy. Marina izany, aleoko mahita mafana zara raha ara-dalàna ao amin’ny mafy shirt (na tsy misy shirt) noho ny sasany efa zokinjokiny lehilahy izay labiera efa nahatratra azy sy ny porofo dia ao an-kibo. Manana namana iray aho izay vao nahazo diplaoma sekoly ambony izay nanatona ahy ary nilaza hoe:»Hey, dia jereo izany aho rehefa lehibe manana ny mihevitra.»ny maha-izy flexed tratrany ahy.
Aho copped ny mihevitra fa raha mbola azoko atao. Efa nanana ny anjara ratsy daty, fa ho an’ny ankamaroan’ny hafa, ny ratsy indrindra amin’izy ireo ny anti-panahy. Anti-panahy manantena be dia be avy amin’ny vehivavy. Rehefa miteny aho hoe aho mpanoratra, tanora matetika ry zalahy fotsiny noda sy ny hoe»mangatsiaka»sy hamela izany ao fa raha ny fahitana ny Kerouac dihy amin’ny alalan’ny lohany (ary tsy manana am-po mba hanitsiana azy ireo). Rehefa miteny aho hoe aho mpanoratra ny anti-panahy nanontany ahy hoe»Nahoana, tsy tapaka izany ao amin’ny tontolo tena izy.»Amin’ny teny hafa, tompokolahy, ry zalahy tanora tsy miraharaha izay miasa. Raha ny tena izy, izany no zavatra farany ny saina raha ianao mahafantatra ny tsirairay. Izaho dia iray amin ireo vehivavy sasany, izay iray sy minibus roa teboka dimy ny ankizy dia tsy natao ho azy. Te-hivezivezy, hihinana pizza any Italia, mba mitaingina ny rameva ny piramida, azonao ny sary. Tanora ry zalahy dia ekena tanteraka ny hiaraka aminao ao ny nofy ny ho afa-mandositra. Ny zokiny ry zalahy ireo matetika dia maika hanambady sy hanan-janaka, na, fara fahakeliny, ny sisa ny fiainany nomanina avy amin’ny kely mahafinaritra fizotry (ny fiainana tafiditra). Raha ianao ny ankizivavy izay efa ho ampahany amin’ny asa, daty tanora lehilahy. Bandy ity dia hitondra anareo ho any ny antoko rehetra, fantany avokoa ny hippest hangouts ary izy no ho voalohany hampahafantatra anao», ao ny»vahoaka. Tanora ry zalahy dia be mangatsiaka kokoa noho izahay, tompokolahy, fa ndao hatrehina izany. Niaraka ny tanora lehilahy, noho izany, tonga dia mahatonga antsika ho mangatsiatsiaka amin’ny fikambanana. Ny mozika dia matetika kokoa, koa. Tsy afaka manamafy izany ampy. Raha hitranga mba hahazo ny tsara tanora lehilahy (ary aho dia hiresaka momba ny ratsy fanahy tsy ho ela) dia hitondra anareo tahaka ny volamena. Tanora kokoa ny olona dia mbola fihetseham-po tena tia ny pianakaviana mpikarakara tokatrano. Raha mety mihevitra izany no mahatonga ny saina mena, dia afaka milaza aminareo aho fa tena hoe manana be dia be ny tsy fanajana ny vehivavy anti-panahy sy hitondra anao ho zavatra kely toy ny nihazona ny varavarana misokatra sy nitondra ny kitapo ho anao. Izaho mitondra ny datin ity lehilahy be taona izay mbola nipetraka tao an-trano niaraka tamin’ny reniko (izay mety hoy aho, tompokolahy, ratsy ny fitsarana momba ny anjara) fa izy efa tsy misy fanajana ho an’ny vehivavy satria izy tsy maintsy manao zavatra amin’ny alalan’ny tenany. Dia nihoron-koditra na oviana na oviana isika, dia lasa nandeha. Izaho tsy maintsy mandoa vola izy, dia nandeha foana eo anatrehako, dia tsy miraharaha ny momba ny hevitro ny lisitra mandeha amin’ny. Tanora ry zalahy vao haingana no nifindra avy ny fianakaviana an-trano sy ao fa»Ankehitriny, inona.»- tsehatra ny fikarakarana ny tenany. Noho izany (manao ny fanasan-damba, mahandro sakafo ho an’ny tenany, sns.) ry zalahy ireo no handeha tena mankasitraka ny reniko, ary noho izany dia mankasitraka anareo toy ny antitra, ny vehivavy manan-kaja. Raha toa ianao ka MILF na cougar, dia efa fantatrao ny zavatra tiako resahana rehefa miteny aho hoe izany lehilahy tia hasehoko anao eny. Ny lehilahy be taona vao mieritreritra anao ao anatin ny drafiny. Ny zokiny ry zalahy no matetika efa manambady alohan’ny na dia efa ny fo torotoro alohan’ny ary tsy hanao na inona na inona vehivavy misy vidiny ampy ny hametraka azy ireo amin’ny faladiany. Tanora ry zalahy, na izany aza, dia mbola azo ho amin’izao tontolo izao ny vehivavy, ary ianao no icing ny mofomamy. Tsy izany ihany no izy, mirehareha any ny namany fa izy dia nahazo ny vehivavy, fa izy nahazo ny vehivavy anti-panahy (izay midika ho fantatrao bebe kokoa ny momba ny firaisana ara-nofo noho ny namany ny vehivavy sakaizany). Ny olon-tiany taloha dia roa ambin’ny folo taona tanora noho ny amiko, ary isaky ny nihaona izahay ny namana, izaho dia hilaza aminareo fa ny zazavavy dia saro-piaro, ary ny ry zalahy foana nanontany raha miaraka amiko izy (raha ny valiny dia»tsy misy»araka izany dia afaka hanontany ahy). Maninona, aoka ny mahazo ny ampahany manan-danja, tompokolahy. Izaho sy ianao dia samy mahalala fa ny antony daty tanora kokoa ny olona dia ho an’ny firaisana ara-nofo. Ankehitriny, dia miaiky, ny zokiny ry zalahy dia malama noho ny hetsika ary matetika izy ireo no tsara kokoa ny ataony. Ny be taona ny olona mahalala ny fomba fahafinaretana ny vehivavy, satria izy no za-draharaha. Mety ho sarotra ny ambony fa tena. Fa tanora kokoa ny olona dia tsara kokoa. Tanora ry zalahy manana telo zavatra mandeha ho azy izany ny anti-panahy fotsiny aza: Ry zareo liana, manana ny tanjaka ary izy ireo dia feno fankasitrahana. Te hahafanta-javatra dia ampahany be ny firaisana ara-nofo tsara. Tsy miraharaha ny fomba tsara ny lehilahy no ao am-pandriana, raha toa isika manao toy izany koa mahazatra isaky ny alina avy eo aho dia leo. Ny zokiny ry zalahy no mamaritra ny fomba sy ny antitra ihany fahazarana dia efa antoka. Tanora ry zalahy koa dia manana be dia be kokoa ny tanjaka. Isaky ny teo aloha ny zazalahy-kilalao (eny, izy fotsiny plaything) mamo, dia mety haharitra mandritra ny ora maro. Izany no tsara tarehy mahagaga. Ny tena zava-dehibe, tanora kokoa ny olona dia feno fankasitrahana. Ry zalahy ireo ka faly mahazo nametraka ny tena vehivavy fa ho faly izy ireo ho eo an-tokonam-baravarana, amin’ny fotoana rehetra, na andro na alina tontolo mba ho azo antoka ianao faly ampy tsara mba hitandrina azy ireo manodidina. Tsy dia lehibe io firaisana ara-nofo, fa izany koa dia be ny hambom-pon’ny tosika. Ny zavatra iray izay tiako indrindra mikasika ny tanora kokoa ny olona dia ny hoe izy ireo dia misokatra tsaina. Ry zalahy ireo hahatsiaro ny zavatra toy izany ny miaina, ary izy ireo dia mampahatsiahy anao ny fomba ny velona. Izy ireo philosophize, dia mihetsika ny tontolo izao ary hojerentsika zavatra avy amin’ny fijery samihafa, izay tena famonjena raha reraka ianao mampiaraka ny lehilahy be taona izay tiany fotsiny ny mipetraka ao an-trano sy ny nijery ny lalao (avy eo dia miresaka momba azy io rehefa avy). Ny lehibe indrindra fahasamihafana hitako eo zokiny sy tanora ny olona dia fa tanora kokoa ny olona dia tsy ho mpampiasa anao manodidina. Izy ireo na mihevitra ianao ny mitovy na dia hieritreritra ianao amin’ny ambaratonga ambony kokoa noho izy ireo (izay matetika ny raharaha). Izaho dia tsy afaka milaza aminareo hoe impiry aho no efa nandre ny zokiny ry zalahy hoe adala zavatra ho ahy toy ny»sasao ny tanana alohan’ny anareo hahazo ny fiara»na»Aza manao izay akanjo mba hariva, miezaka ny iray hafa kosa». Aho, na dia efa nandre»ny tena, tsy mieritreritra ianao hoe tokony hianatra zavatra mahasoa kokoa ao amin’ny oniversite.»Anao hahita hoe aiza io no handeha, tsara. Ny vehivavy, ny hany azoko ambara dia ny hoe ny tanora ny olona dia tsy milaza zavatra vendrana tahaka ity (izy ireo hoe hafa ny zavatra bado fa tsy ny teboka). Tanora kokoa ny olona dia mahafantatra tsara kokoa noho ny tsy hilaza aminareo izay ho (ny ankamaroany satria tsy nieritreritra izay izy ireo dia mbola). Okay, tsy manana izany zavatra izany manohitra whiny olona amin’ny ankapobeny. Raha manana bebe kokoa noho ny baolina ianao, dia tsy tokony ho fiarahana. Na izany aza, ny olona avy amin’ny sokajin-taona rehetra hoe (ary hanao) tena adala zavatra indraindray. Dia mora kokoa ny miatrika azy avy amin’ny amby roa-zavatra (izany karazana andrasana mandritra ny taona) dia noho izany indrindra dia avy amby efa-zavatra (ny tena izy, dia nanao izany.). Fotsiny iray hafa miasa mafy reniko izay tia azy ny ankizy, tia manoratra, tsy afaka mahandro sakafo, ary ny zavatra ho tentacles. Rehefa tsy azoko mihantona avy miaraka amin’ny Spawn, azoko am-pifaliana ny fizarana ny mampiaraka zava-niainany sy ny fanomezana toro-hevitra sy miezaka ny hifehy ny korontana izay avy amin’ny maha-olombelona. Amim-pahatsorana marina avokoa izany. Izaho efa ho enina ambin’ny folo sy ny olon-tiany. Izy mihoatra jaza ary afaka handray ny vazivazy ary ny karazana toetra. Ny lehilahy be taona mihevitra aho tena tsy matotra: Mampihomehy, enina ambin’ny folo taona ny ankizivavy, raha ny marina no nanao fanehoan-kevitra ity. Toy ny enina ambin’ny folo taona ny ankizivavy-hahafantatra ny fomba kosa ny lehilahy. Izaho koa tia be ry zalahy tanora. Raha mbola izy dia ara-dalàna taona dia ny taona dia tsy nitondra. Izaho dia nivady nandritra ny valo taona, ary nisaraka teo, ny tena voalohany dia ny firaisana ara-nofo araka ny fisaraham-panambadiana teo amin’ny roa-polo taona aho tamin’izany. Ny toro-hevitra ny vehivavy dia ny santionany tanora lehilahy, izy no tena tsara. Mandehana any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka sy hitandrina mety, ny matanjaka dia tokony hifanaraka ianao mans. Imbetsaka aho no nandeha mandritra ny alina ary tia mankafy ny vaovao tovolahy. Ny farany tanora olona manana ny mafy tanana amin’ny ahy, ary izaho fotsiny dia ketraka rehefa fantatro fa hitondra ahy kely lava volo. Tiako ny lehilahy sy ny firaisana ara-nofo bebe kokoa noho ny hatramin’izay, ary tia vonona izy ireo hanao izay hahafaly ahy. Fotsiny aho nanasohaso fa amin’ny taona iray aho, dia efa roa ry zalahy be latsaky ny ahy liana. Aho. Ny anankiray dia roa amby efapolo sy mandalo ny fisaraham-panambadiana.
Ny iray voalohany dia tsy handeha lavitra loatra, tena azo inoana fa noho ny fisaraham-panambadiana ny ratram-po. Hoy aho tsy mba Atoa aho tena te hiteny hoe eny. Tena mahafatifaty, mampino sexy, lehibe conversationalist. Izaho dia adala tia azy raha vao nahita azy. Aho vao tsy hookup zazavavy. Ny reniny ary izaho dia mitovy amin’ny taona, saingy maty izy efa-taona lasa izay. Mihevitra izy neny olana. Fa tena mamy izany. Aho mampiaraka ny dimy amby roapolo taona lehilahy aho. Izy no misisika be ianao sy ny manaraka manodidina ahy foana aho very ny lehilahy namako, tsy mampiasa ny media sosialy ary tsy mivoaka. Izy hiala amin’ny asany, dia manamarina ny finday (izaho dia hamela izany ho an’ny manodidina azy, mba hijery izy satria ny tena vidiny) tena nieritreritra aho fa afaka hanampy azy aho nanome ny be mba hanampy mora ny tsy fandriampahalemana, fa na inona na inona efa niasa aho, tena tsy mieritreritra aho daty tanora ny lehilahy indray. Isika dia nanolo-tena ho amin’ny famoronana vaovao, mahitsy sy tsy manam-paharoa torohevitra ho an’ny vehivavy fa tsy mampahafantatra fotsiny ihany, fa mampianatra sy mampientanentana ny anao. Miezaka isika mba hanampy anao hitombo amin’ny lafiny rehetra amin’ny fiainanao. Avy amin’ny fitiavana sy ny fahasalamana ny fitadiavana ny fiainana ny tanjona, dia mandroso ny asa sy ny nanaovany ny tsara kokoa ny fomba fiainana
← Inona no fomba tsara indrindra ho an'ny vehivavy tokan-tena iray mihoatra ny dimam-polo mba hihaona ny olona, ho an'ny fifandraisana matotra. Ny Fiarahana Amin'ny Aterineto
Arabo Mampiaraka amin'ny Arabo fandraisam-bahiny →